Gadgets & Apparrow_drop_down
Games & Moviesarrow_drop_down
Tips & Tricksarrow_drop_down
iPhone 11 Pro, Galaxy Note 10 နှင့် Galaxy S10 specs ဇယား
Specification ကြည့်ပြီးမှရွေးတဲ့သူတွေအတွက် iPhone 11 Pro, Galaxy Note 10 နှင့် Galaxy S10 ရဲ့ specification ကိုယှဉ်ပြထားပေးတယ်နော်... iPhone 11 Pro Galaxy Note 10 Galaxy S10 Display OLED Super Retina XDR Dynamic AMOLEDDynamic AMOLED Size 5.8 6.3 6.1Resolution2,436 x 1,1252,280 x 1,0803,040 x 1,440Pixel density 458 ppi402 ppi
10 months ago Mobile Phone • Comparison
Apple iPhone 11 Pro နှင့် Samsung Galaxy Note 10 ဘယ်ဟာရွေးရမှာလဲ?
Apple နှင့် Samsung က iPhone4နှင့် Galaxy S i9000 ထဲက အခြားဖုန်း brand တွေကြား အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်လာခဲ့တာ အခုချိန်ထိပါပဲ။ Flagshio ဝယ်တော့မယ်ဆို လူတော်တော်များများက iPhone လား Samsung Note series လား S series လားလို့ပဲမေးတာများကြတယ်။ ဒီ flagship နှစ်ခုလုံးကလဲ အခုဆို $1000 ရှိနေတဲ့ဖုန်းတွေပါပဲ။ အဲ့တော့ $1000 တန် flagship ဝ�
MPT ရဲ့ဖိုင်ဘာ အင်တာနက်ဈေးကိုလိုက်မည့်သူရှိမလား
ဒီအပတ်လေးတင် MPT ကမြန်နှုန်းနှစ်ဆမြင့်လိုက်တဲ့ ဒုံးပျံအိမ်သုံးဖိုင်ဘာကတော့ 20Mbps ကို 39,000 ကျပ်ပဲရှိတော့တယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေလို အိမ်တိုင်းသုံးနိုင်တဲ့ဈေးကိုမှီဖို့တော့ သိပ်မလိုတော့ဘူးထင်တာပဲ။ လောလေယဆယ်မှာတော့ ဒီဈေးနှုန်းနဲ့ ဒီ speed ရတာ MPT ပဲရှိပါတယ�
1 year ago Mobile Phone • Comparison
© 2018 Tech Hub. All Rights Reserved.